‘जनअभिमतमा आधारिक लोकतान्त्रिक विधि’ सससससीकेसँग सम्झौताको मोडालिटी के ? - newslinesnepal
‘जनअभिमतमा आधारिक लोकतान्त्रिक विधि’ सससससीकेसँग सम्झौताको मोडालिटी के ?
प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०७५, शुक्रबार २१:११
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देव सरकार र सिके राउतबीच भएको ११ बुँदै सम्झौँता सकारात्मक भएको बताएका छन् ।
फागुन २६ गतेको राष्ट्रिय सभाको सम्बोधनमा सांसद देवले उक्तm सहमतिलाई काँग्रेसले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेको पनि जानकारी गराए ।
राउतले विखण्डनको कुरा त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको भन्दै कांग्रेसले यो सुहमतिलाई आँखा चिम्लेर समर्थन सांसद देवले बताए ।
उनले सहमतिको २ नम्बर बुँदामा रहेको जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समस्याको समधान खोजिने भन्ने कुरा बहसको विषय हुन स्वभाविक भएको तर्क गरे ।
सांसदे देवाले यो विषयमा सत्तासीन दलका सांसदहरुबाटै विषय उठिरहेको भन्दै लोकतन्त्रमा अपार्दशीता हुन निरंकुस्ता हुने दाबी गरे । उनले भर्खरै लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न खोजेका माक्र्सवादीहरुले बुझ्न जरुरी रहेको बताए । सरकारले पारर्दशी र शब्द चयनमा ध्यान नदिएकाले विवादको सिर्जना भएको उनको भनाई छ । उनले नेकपाका सांसदले ब्याख्य गरेर नहुने भन्दै सरकारबाट नै प्रष्ट जवाफ आउनु गर्ने बताए । जनअभिमतमा आधारिक लोकतान्त्रिक विधिको मोडालिटीबारे प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनु पर्ने सांसद देवको धारणा थियो ।